खानामा सोडियमको मात्रा कसरी कम गर्ने ? | सुदुरपश्चिम खबर
यसको लागि उच्च सोडियमयुक्त खानेकुरालाई पूर्ण रुपमा बन्देज गर्न जरुरी छैन । खानामा सामान्य ध्यान दिएर तथा प्रोसेस्ड गरिएको खानेकुरा तथा जंकफुडको सेवन कम गरेर पनि सोडियमको मात्रालाई नियन्त्रणमा राख्न सकिन्छ । जसको मद्दतले रक्तचाप कम हुनुका साथै तौल समेत नियन्त्रित हुने गर्छ । (अनलाइनखबर बाट सभार)
हरेक दिन अशुभ हुन्छ यो समय, भूलेर पनि नगर्नुहोस् शुभ काम !!